ဗိုလ်သူရိန် ● အညတရ နွမ်းလျအိမ်အပြန် | MoeMaKa Burmese News & Media
x x x ဒီလို အတိတ်က မိမိဖြစ်ရပ်များနဲ့ ယခုပင်စင်စား စစ်ပြန်ကြီး ရဲဘော်လှရွှေ ဒီဘူတာထဲက ရဲဘော်လေးကို နှစ်သိမ့် အားပေးရုံမှတပါး ဘာမှ မတတ်နိုင်ပြီ။ ‘မင်းကွာ အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာ’လို့ ရဲဘော်လှရွှေ စိတ်အတွင်းကသာ ပြောနိုင်ပြီး ပင်စင်လစာထဲက ငွေကြေးအချို့နဲ့ အနီးနားဈေးဆိုင်က ကျွဲရိုင်းတစ်ဗူးသာ ဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ယခုလို တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ မော်တော်ကားတွေ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေ ကောင်းနေတာ ဘာလို့များ . . . ရဲဘော်လှရွှေ ဆက်မတွေးချင် တော့။ မိမိလိုက်မယ့် ရထားကလည်း အချက်ပေး သံချောင်းခေါက်သံပေးနေပြီ။ ရဲဘော်လှရွှေ ဆိုက်ရောက်လာသော ရထားပေါ်လေးလံစွာ တက်ရောက်နေမိတယ်။ ၁ မိန်ကျော်သာရပ်တဲ့ ရထားကြီးက ထွက်ခွာ သွားပါပြီ။ ရထားပေါ်မှ စစ်ပြန်ကြီ်းရဲဘော်လှရွှေ ရဲဘော်လေးကို အလေးပြုလိုက်ပါတယ်။ ရဲဘော်လေးက မျက်နှာပြုံးလို့ ပြန်နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ရဲဘော်လှရွှေတို့လို ဘူတာရုံက ဒဏ်ရာရ ရဲဘော်လေးတို့လို အခြားသော အညတရ စစ်သည်တို့ ရဲ့ အိမ်အပြန် ခရီးလမ်းက ချောမွေ့ပါရဲ့လား ပင်ပန်းနွမ်းလျလျှက်ပဲလား အတွေးစ များစွာနဲ့… . . ရထားကြီးကတော့ တစ်ဘူတာပြီး တစ်ဘူတာ မောင်းနှင်ထွက်ခွာလို့ ….
ဂျုံး ဂျုံး ဂျက် ဂျက် ….
ဂျုံး ဂျက် ဂျုံး ဂျက် ….